OoVimba beDeFi-Funda ukuRhweba
Ukurekhodwa kweRekhodi yokuBuyisa ngokuBalulekileyo phakathi kwePhuculo leNtengiso yeDeFi
Ngentengiso yeDeFi kwindlela ethe chu yokunyuka, Ave iyaqhubeka nokuphinda ibuye ibambe amandla ngoMvulo. I-cryptocurrency engamashumi amabini anesixhenxe ngobukhulu inyuke nge-8% namhlanje, ngexabiso lokurhweba iiyure ezingama-24 ze- $ 383 yezigidi.
Ithokheni yeDeFi okwangoku ineqhayiya kwindawo yokuqala njengeyona ndlela iphambili yokubolekisa ngeDeFi, ngaphezulu kwe- $ 16 yezigidigidi ngexabiso elipheleleyo. Inkampani ye-cryptocurrency kutshanje ibhengeze izicwangciso zokuphehlelela iAave Pro, eya kuthi isebenze kuphela kwintengiso yabatyali mali.
Iqonga elitsha liza kuxhasa kwaye lenze ukuba kusebenze imvume yamachibi abantu abaqinisekisiweyo abaphumeleleyo Yazi uMthengi wakho (KYC). Le projekthi iza kuphelisa omnye wemiqobo ebalulekileyo kumaziko alawulwa ngokuzibandakanya kwezemali (iDeFi).
Imali yedijithali ikwindlela efanelekileyo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo emva kokudodobala kwemarike ye-crypto. Oko kwathiwa, abatyali mali kunye nabarhwebi ngoku banamehlo abo ekuchaseni okubalulekileyo kwe- $ 350, enokuthi, ukuba yaphukile, inokubangela ukunyuka okunyukayo ukuya kwi- $ 400.
Kwezinye iindaba, ishishini le-cryptocurrency e-United Kingdom lifumene ukukhanya okuluhlaza kunye nesicelo salo se-Electronic Money Institution (EMI). Le layisenisi iya kuvumela abasebenzisi be-AAVE ukuba basuke kwii-fiat zemali zakwantu baye kwii-solidcoins kunye nezinye ii-asethi zedijithali ezilawulwa kwi-ecosystem yayo. Ezi mali / iiasethi zinokusetyenziswa kwiProtocol yeAave.
Amanqanaba aphambili eAave okuBukela-nge-12 kaJulayi
I-AAVE isendleleni esempilweni eya ekuchaseni i-350 yeedola njengoko urhwebo nge-imali yedatha lusebenza ngokunyuka okunyukayo. Isigebenga seDeFi sifumana inkxaso kwimigca yezobuchwephesha, kubandakanya i-200 SMA, i-50, i-SMA, i-trendline, kunye ne- $ 300 yenkxaso yezengqondo.
I-AAVEUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Oko kwathethileyo, eyona ndlela incinci yokuchasana nemali yedijithali inyukele phezulu phakathi kokufumana kwakhona ivolumu yorhwebo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 350, i- $ 400, kunye ne- $ 450, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 300, $ 240, kunye ne- $ 170.
I-Aave yoTyalo-mali lweNtengiso: $ 3.79 billion
Ulawulo lweAave: 0.27%
tags Ave, Cryptocurrency, Defi, iindaba
Ngaba abantu banako ukufumana umvuzo kwifama? Nantsi eyona mpendulo ilungileyo
Ukuba ngaphambili, kwicandelo lee-cryptocurrensets, abatyali mali bafuna ukufumana indlela yokunyusa ingeniso okanye yokunyusa inani leemali ezigcinwe ngorhwebo, ngoku kukho indlela entsha yokunceda abatyali mali banyuse ngokukhawuleza loo mali. Kukulima isivuno.
Ke yintoni uLimo lokuLima? Ingaba isebenza kanjani?
Inqaku elilandelayo liza kukunceda uliqonde ngcono eli kota kwaye likuncede wenze imali ngale ndlela ngendlela ekhuselekileyo.
Makhe sijonge kwikota ye-DeFi yokuLima. Ngaphambi kokungena kwiinkcukacha ezithe kratya malunga nokuLima ngokuVumayo, siza kulithatha igama elithi DeFi.
I-DeFi ngokubanzi ibhekisa kwizemali ezabiweyo. Imali eyabelwe abasemagunyeni inokuchazwa ngcono ngokuchaza into echaseneyo nayo, yona ke yona imali eseMbindini. Yinto esiyiqhelileyo namhlanje. Imali esembindini ithetha ukuba kukho inkampani okanye iziko elinamandla embindini wayo yonke intengiselwano yezemali. Umzekelo, ufuna imali-mboleko ebhankini, kwaye uye ebhankini. Ukuba abantu abasebhankini abayithandi ikhredithi yakho, abayithandi imibala yakho okanye uvelaphi, awunakuyifumana loo mali-mboleko.
Ingxaki enye malunga nemali esembindini yeyokuba kukho umbutho ophakathi olawula ukufikelela kwinkunzi kwaye kufuneka utolike yonke imigaqo ebhaliweyo kwaye ujonge ukuba uyazifanela na ezo ngcaciso. Ngokwahlukileyo, imali eyabelweyo zonke iinkqubo ezizenzekelayo ezikhoyo kwi-Ethereum blockchain. Akukho ndawo iphakathi apho unokuthi ulawule intengiselwano yakho. Ungaya kwaye uthathe izigqibo zakho zokuboleka ngokusekwe kungatolikwa mntu kodwa nokuba uyahlangabezana nemigaqo ebekiweyo
Le ndlela intsha yemali ijolise ekwenzeni imisebenzi yezemali enjengokubolekisa, ukuboleka, ukutyala imali kumaqonga abekwe kwindawo evulelekileyo kwaye angawenzi
Thembela kumaziko amakhulu.
Yintoni ukulima okuvelisayo?
Enye yezinto ekhoyo kwisakhelo seDeFi luhlobo lwenkqubo ebizwa ngokuba sisivumelwano se-smart, esibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwenkqubo yonke. Uhlobo lwe
ikhontrakthi ehlakaniphileyo ibizwa ngokuba yindawo yokuhlawula amatyala abantu abanokuthi bavelise kuyo ukulima.
Ukuvelisa ukulima yinkqubo yokuthatha utyalo-mali lokuqala ukufumana inzala yonyaka kwaye ungalukhulisa olo tyalo-mali ngaphandle kokongeza imali entsha. Ngokulula, oko kuthetha ukuvalela ii-cryptocurrensets kunye nokufezekisa umvuzo.
Uvelisa njani umsebenzi wokuLima?
Ukuwuqonda ngcono lo mbono kuya kufuneka sazi ngemodeli ye-Automated Market Maker (AMM). Singazikhankanya ii-AMMs ezithandwayo njengeLaunchZone, Uniswap okanye iPancakeswap. Njengokutshintshiselana okuphakathi, i-AMM inezibini ezahlukeneyo zokurhweba kodwa ngakumbi akukho zixhobo zokuthenga okanye ukuthengisa kwaye abathengisi akufuneki bakhangele abathengi. Endaweni yoko, ikhontrakthi ehlakaniphile iya kusebenza nendima yomdali wentengiselwano yotshintshiselwano.
Ke ngoko, nangona kungekho sidingo sabalamli, umntu kufuneka enze intengiso kwaye abonelele ngokuthengiswa kwemali. Abo ke ngababoneleli bemali yokuhlawula amatyala (LPs). Xa ufuna ukutshintshiselana nge-Usdt nge-BSCX, uya kuyitshintsha kunye neLiquidity Pool. I-USD idluliselwa kwiChibi kwaye i-BSCX iya kuba isusela echibini iye kwisipaji sakho. Xa omnye umntu efuna ukutshintshisa i-BSCX nge-Usdt inkqubo iyafana.
Ukuqonda ukuba ukubuya okuphezulu kangako kufanelekile, kufuneka uqonde i-TVL kunye namachibi okuhlawula amatyala, zinto ezo zizinto ezintathu eziphambili kulimo lwesivuno.
Ixabiso lilonke livaliwe (TVL)
I-TVL kukungabinamali iphelele kumachibi okuhlawula amatyala, okwenza ukuba kube yimetri efanelekileyo yokulinganisa impilo yeDeFi kunye nemarike yokufama yokuvelisa ngokubanzi. Ikwayindlela esebenzayo yokuthelekisa "isabelo sentengiso" seenkqubo ezahlukeneyo zeDeFi. Indawo elungileyo yokubukela iTVL yiDeffi Pulse.
Apha ungajonga ukuba leliphi iqonga elinelona nani liphezulu le-ETH okanye ezinye ii-cryptocurrensets ezivaliweyo
kwi-DeFi. Ngokunjalo, inokukunika ukujonga ngokubanzi imeko yokufama yangoku.
Ewe, ixabiso livaleleke, kokukhona imveliso yokufama iyaqhubeka nokukhula. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-TVL inokulinganiswa kwi-ETH, USD, okanye nakwi-BTC. Nganye iya kukunika umbono owahlukileyo wemeko yentengiso yemali yeDeFi.
La madanyana avumela nabani na ukuba abeke iiasethi zakhe kuwo ukuze afumane umvuzo wokungena ngenzala. Inzala iveliswa kwimirhumo yokurhweba ebekwe kubasebenzisi abangena kula madama ukuze benze utshintsho. Isasazwa kubo bonke ababoneleli ngemali ngokusekwe kwipesenti yeephuli abanikezelayo.
Ibalwa njani iNgeniso yezoLimo?
Ngokwesiqhelo, inzuzo evela kwiFama yokuLima iya kubalwa rhoqo ngonyaka, njengenqanaba lenzala kwidiphozithi yokonga yonyaka omnye. Kukho iiyunithi ezimbini zemilinganiselo yenzuzo oqhele ukuyibona i-APY (Ipesenti yoNyaka yokuThwala) kunye neAPR (iipesenti zoNyaka zePesenti). I-APY ithathela ingqalelo inzala yeqela ngelixa i-APR ingenayo. Ukuba kunjalo, ngaba ikhona indlela yokubala inzuzo kwiLimo lokuTyala kwixesha elifutshane?
Kunzima ukuqikelela ingeniso evela kwiFama yokuTyala kuba liphulo elikhuphisanayo kwaye uninzi lwezinto ezintsha njengoko iiprojekthi zizama ukutsala abatyali mali ukuba babonelele ngenkqubo yemali. Ngenxa yoko, amanqanaba enzuzo anokutshintsha ngokukhawuleza okukhulu kwaye kunzima ukubala ngokuchanekileyo kwixesha elifutshane.
Khawufane ucinge oku, xa umsebenzisi ebonelela ngemali yeprojekthi, umthetho olandelwayo uya kusebenzisa i-algorithm eyakhelwe-ngaphakathi ukubala ngokuzenzekelayo isixa esithile somvuzo. Okukhona abantu bengena kwiifama, kokukhona wonke umntu ufumana umvuzo ophantsi, oko kukhokelela kwinzuzo esezantsi evela kwiFama yokuLima xa kuthelekiswa neyasekuqaleni.
Ngenxa yoko, emva konyaka omnye, eyona mali uyibuyileyo isenokungafani ne-APY okanye i-APR ngela xesha wawunikezela ngenkqubo yemali, ungayithatheli ngqalelo intshukumo yexabiso leasethi yentsusa.
Umngcipheko wokuLima ngokuLima
Yonke into engentla isenokuvakala imangalisa, kodwa ukulima isivuno kugcwele umngcipheko. Njengayo nayiphi na into kweli hlabathi, ukubakho kwembuyekezo ephezulu kuhlala kuza nethuba lokulahleka kwemali. Kwimeko yokulima isivuno, owona mngcipheko mkhulu uvela kukusilela kwesivumelwano. Ngenxa yokuba yonke intsimi yeDeFi isencinci kwaye isakhula, iingxaki zinokubakho. Kuhlala kukho ithuba lokuba ikhontrakthi ehlakaniphileyo isenokungaphumeleli okanye ibe nokungafezeki okunokubangela ilahleko yemali.
Ngapha koko, ilahleko engapheliyo ngomnye umngcipheko ekufuneka ulumkile kuwo. Eli gama lithetha ukuba uhlala uthengisa ngeengqekembe ezenza ngcono ukuze utshintshise ezantsi. Nangona kunjalo, ungakhathazeki kakhulu ukuba utyala imali kwiprojekthi elungileyo. Kule meko, ilahleko engapheliyo isengabalwa yimirhumo yentengiselwano kunye nenxalenye yethokheni enokulinywa.
Ukuvelisa ukulima kuzisa inzuzo ephezulu ngexesha elifutshane. Le yinto ekungekho mntu unokuyiphika malunga nomtsalane wayo. Nangona kunjalo, isivuno sokufama sisenomngcipheko njengokucinywa kweeasethi, ukubiwa ngenxa yeekhontrakthi ezibuthathaka. Ke ngoko, kufuneka ulumke xa uthumela imali kwiiprothokholi zeDeFi ukuya efama.
Kukho amathuba amaninzi okufumana inqanaba eliphezulu lokubuya xa kuthelekiswa nemali yemveli. Ngaphandle koko, kusafuneka sikhumbule ukuba iselishishini elitsha kakhulu, ke igcwele umngcipheko. Siyathemba ukuba eli nqaku likunike ulwazi oluluncedo kuwe malunga neDeFi kunye nokuLima kweMveliso.
tags Defi, Iphuli yemigodi, Ukulima isivuno
I-Crypto Innovation ityhola iBitcoin njengeKamva leMali
Ukuhlaziywa: 23 Disemba 2020
Iintsomi ze-cryptocurrensets kunye noqikelelo lwexesha elizayo ziphantse zaguquguquka njengexabiso lazo. Kodwa zeziphi izinto ezintsha ngo-2020 eziza kunamathela?
Kwiminyaka emininzi uluvo lwe-bitcoin lwalungathembeki kunamanzi ashushu kwisakhiwo seNew York. Ukutshintsha ngokukhawuleza phakathi kokutshisa nokubanda, uninzi lwabatyali mali abanamava kunye noosomashishini abanobuchwephesha babonakala ngathi abazenzi zengqondo zabo. Nangona kunjalo, ukusukela nge-2019, izimo zengqondo ngokubhekisele ekuhlaleni amandla e-crypto kubonakala ngathi ziyaqina. Kwaye ngoku, ngo-2020, phantse wonke umntu ubonakala evuma- i-crypto ilapha ukuze ihlale.
Ayisiyiyo kuphela inkoliso yabantu yokurhoxa kwinto elula yokuba iicryptos ezifana ne-bitcoin ziye zaba yinxalenye yobomi "obuqhelekileyo", kodwa zikwabonakala ngathi zilumkele amathuba aphantse abe mda anokubakho kwi-crypto-technology. I-2020 ibingunyaka wasendle kuzo zonke iinkalo, kodwa kuluntu lwe-crypto, kulo nyaka kuphawulwe enye yezona zinkulu kwinto entsha. Ukutshintshana okunje IBitvavo uncede ukuzisa abatyali mali abatsha, ubakhokele kwindlela yokwenza uninzi lwamava abo e-crypto kunye notyalo-mali lwe-bitcoin. Iiyunivesithi ezihloniphekileyo ziphuhlise ukhuphiswano lokuqhubeka nokulandela imida yezinto ezintsha kwindawo yenethiwekhi, iifemu zotyalo-mali ziqhube ukwamkelwa kwamaziko, kwaye nezona ntanethi zithandwayo ngokwazo ziye zaxhamla kolu thando luhlaziyiweyo lwe-crypto yayilikamva lobuchwephesha.
Eyona ndlela intsha i-Crypto Innovations ka-2020
I-DeFi, okanye imali eyabiweyo, sisiseko esisisiseko semali ye-cryptocurrensets efana neyunithi esebenzayo yeenkqubo zebhanki esembindini. Izinto ezinje ngokutshintshiselana, ngeebhanki, kunye neearhente zabarhwebi zisebenza njengabalamli bezezimali kuthungelwano lwebhanki oluphakathi. Njengoko ii-cryptocurrensets zisasazwa ngokubanzi, aba bathetheli kusafuneka babekhona kubatyali zimali ukuba babambe iiakhawunti zokonga, baboleke kwaye baboleke imali, okanye bacinge ngokusebenzisa ezinye - kodwa kufuneka zibekho ngendlela enabileyo. Ergo, azinakulawulwa okanye zilawulwe ngumntu omnye.
Kwisithuba se-crypto, abalamli beDeFi baqhutywa kusetyenziswa iikhontrakthi ezifanelekileyo. Ezi khontrakthi ngokuyintloko zimele uthotho lweeprothokholi "Ukuba Oku Kube Kukoko Oko" (IFTTT). Oko kuthetha ukuba endaweni yabagcini-masango abangabantu, iikhontrakthi ezikrelekrele zisebenzisa ukuzalisekiswa kwedijithali, i-cryptocurrency, kunye neebhloko zokuqhuba iikhontrakthi. Ngexesha le-2020, kuqikelelwa ukuba i-11 yezigidigidi zeedola yatyalwa kwiindidi ezahlukeneyo zamaqonga e-DeFi kunye neeprotocol zezemali. Kukuphi ukukhula okukhulu kulo nyaka kuphela. Uphuhliso oluqhubekekayo lwezakhiwo zeDeFi kunye neeprotokholi ziyaqhubeka nokukholelwa eluswini ukuba i-crypto iya kuba yindlela efikelelekayo yemali yemihla ngemihla kwixa elizayo.
Mhlawumbi enye yezinto ezinkulu ezibonwe ukuba zikhutshwe kulo nyaka wesiphithiphithi yayiyiyo leyo Ethereum 2.0, okanye "Ukuzola". I-Ethereum, enye yezona mali zisebenza kakuhle ze-crypto phantsi kwe-bitcoin, ikwalilo iqonga uninzi lweenkqubo ze-DeFi ezisebenzayo. Ngaphandle kokuba ngumvelisi omkhulu we-monster, inethiwekhi ye-ethereum ikwanayo ne-cryptocurrency yayo: ether.
I-Ethereum yayakhiwe ngokukodwa njenge-spin-off kwisiseko sokuqala se-bitcoin- ejolise ekubeni yiplatifti yezemali njengokuba yayiyimali. Ngelixa inethiwekhi ifezekise uninzi lweenjongo ezibekele zona, bekukudala iphantsi koxinzelelo ngenxa yemicimbi esebenzayo. Ngaphezulu kolu luhlu, iinkxalabo zokungahambi kakuhle kunye neefizi zentengiselwano ezinxulumene noko bekudala kuyingxaki. Sebenzisa ubungqina bokuba nokuQinisekiswa koMsebenzi (kufana ne-bitcoin), kunye netekhnoloji esemgangathweni ye-blockchain- uthungelwano lwalungenako ukubamba inani leetransekshini eziyimfuneko ukufezekisa izicwangciso zabo zokuqala. Nge-Disemba yalo nyaka, inethiwekhi ityhile "ukuzola" ukusebenza ngokupheleleyo kwenethiwekhi okusebenzisa ubungqina bendlela yokuqinisekisa isigxina, kwaye yazisa "imixokelelwane ye-shard", enye indlela kwitekhnoloji ye-blockchain. Zombini ezi zinto kufuneka zisombulule imiba enxulumene nokusilela kunye namaxabiso aphezulu.
Nkqu iibhanki embindini, iziseko ezezimali zakudala zikubonile ukukhanya ekugqibeleni kwitonela le-blockchain. Mhlawumbi ngenxa yezinto ezintsha ezisandula ukwenziwa kwi-DeFi, okanye i-coronavirus yenoveli ebangela ukunqongophala kwemali kunye nokusishukumisela ngokwendalo ukuya kuluntu lwedijithali, okanye mhlawumbi nokuba ekugqibeleni babonile ukuba ikamva liphethe i-crypto- nokuba yintoni, oorhulumente kwihlabathi liphela bebekhwaza ukukhupha "iBhanki ePhakathi yeDijithali yeeMali", okanye ii-CBDC.
Ngaphandle kwento yokuba ezi mali zedijithali zisazakubekwa embindini, ii-CBDCs zisebenza ngokufana kakhulu ne-cryptocurrency, kwaye ezinye zezoqoqosho olunamandla ehlabathini ziyazikhupha. Kulo nyaka, iBhanki yeDeutsche, eyona ndawo iphambili ye-European Union, ikhuphe ingxelo exoxa ngokubaluleka kwamazwe kwi-CBDC bandwagon. Ngokusisiseko ichaza ukuba iimali zedijithali ziyimfuneko ukwenza ngoku, njengoko ikamva ngokuqinisekileyo lixhomekeke kuzo.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho yile tumente ye-crypto- olu khuphiswano, luxhaswe ziiyunivesithi eziphezulu, zinceda ekutyhaleni izinto ezintsha kwi-crypto kunye nokubonelela ngemivuzo emihle kwabo bathabathayo. Iitumente zeCrypto zifumene ukuthandwa ngo-2020, njengoko uchulumanco olutsha kwiDeFi, iSerenity, kunye nolunye upapasho lwamva nje luye lwabeka ukukhanya kwikamva le-cryptocurrency.
Olu khuphiswano lujolise ekuphuculeni ii-algorithms esele zikhona, kunye namaqela amandla okurhweba ngokubanzi, kunye nezinye izicwangciso zengqondo ze-crypto. Ngaphezulu kweenkundla ezininzi, ezi tumente zinceda ekuqhubekeni nezinto ezintsha kwisithuba se-crypto. Kukwakho namanye amabhaso amnandi kakhulu e-cryptocurrency aya kumagcisa aphezulu. Oko ngokungathandabuzekiyo kuya kunceda i-crypto igcine ukubambelela okuqinisekileyo kwintengiso kunye nekamva lezemali ngokwazo.
tags Bitcoin, block Chain, BTC, Ii-DCDCs, Defi
Eyona ndlela yokuTyala imali kwiDeFi
Ukuhlaziywa: 30 Agasti 2020
Senza uluhlu olutsha lwe-MLM ngeDeFi, engeyonto intle ngombono wam. Akunakulinganiswa kwaye kuyingozi. Nangona kunjalo, i-MLM ixhasa ngemali isizukulwana esitsha semveliso yezemali eza kuthi iphinde ibuyisele inkqubo yezemali esele ikho, nto leyo entle ngombono wam.
Ekugqibeleni, ukuhamba ngokukhululekileyo kwemali kulungile - ngakumbi ukuhamba ngokukhululekileyo kwemali ukuya kwindawo efuneka kakhulu. Siya kuba sisendleleni eya kwilizwe elinobulungisa ukuba singazisa imali kusomashishini waseMombasa, okanye isihlobo e-Iceland, okanye abantwana besikolo eBeirut -kwangoko, kwaye ngaphandle kwabagcini-masango bezemali. Inkqubela phambili yomntu ithatha ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza.
Masiphinde sithethe phandle: Iibhanki zihlala zinzima, azisebenzi kakuhle kwaye azichazi. Ibhanki yam igcina zonke iimali zam kodwa kwisikhumbuzo sam zange banditsalele umnxeba. Bandixelela ukuba bonwabile na kodwa ukuba nomntu emnxebeni kuthatha iminyaka. Icandelo lebhanki lilungele ukushukuma.
Kwi-DeFi kukho indawo enye elula yokutyala: e-Ethereum. Phantse yonke i- $ 7.5 yezigidigidi ityalwe kwizicelo ezisekwe kwi-Ethereum.
Njengokutyala imali kwiintsuku zokuqala zikaMicrosoft, u-Ethereum utya iibhanki ngelixa wonke umntu ezama ukufumana ukuba inkqubo yokusebenza yayinjani. I-Ethereum yeDeFi iyaguquka njengemodeli yento.
Njengoko benditshilo kwiintsuku ezidlulileyo, utyalomali e-Ethereum ayilotyalo-mali lweshishini. Awunazo izabelo zokulingana. Kodwa njengoko ukuthandwa kwenethiwekhi ye-Ethereum kugcina kukhula, ukuthandwa kwethokheni ye-Ethereum (i-ETH) kunokwenzeka ukuba inyuke ngakumbi. Xa uthenga i-Ethereum, ubeke ukubheja kwakho kwikamva le-Ethereum.
Ikamva ngoku lijongeka njengelinyani kunangaphambili.
Kwiinyanga ezizayo, uya kuva amabali atyebileyo atyebileyo malunga neDeFi kodwa ayisiyiyo indlela yethu leyo. Silapha ukuze sisebenze nawe ukudala ubutyebi, ukuchuma, kunye nolwaneliseko ebomini bakho-ngokuzisa ixabiso apho kubaluleke kakhulu.
Kwaye ekubeni iDeFi kukuqhuma okuqikelelweyo, ngaphandle kokuba yi-MLM enkulu, le software-based, imodeli yezemali yoontanga inokutshintsha icandelo lezemali eliqhelekileyo. Kwaye ukuba unayo imali onayo, cinga ngokudlala malunga neziapp-kodwa qaphela, ukuthenga nokugcina i-Ethereum lolona tyalo mali lulula lweDeFi.
tags Defi, Ethereum
Umququzeleli we-Ethereum Vitalik Buterin uhlasela icandelo le-Defi njenge 'Flashy Stuff'
UVitalik Buterin, umseki-mbumba we-Ethereum, uhlasele imakethi ekhula ngokukhawuleza yolawulo lwemali (DeFi) njengokuphazamiseka okwethutyana.
Ngothotho lweetweets, umdwelisi waseRashiya-waseKhanada waya ku-Twitter ekwabelaneni ngombono wakhe ngeDeFi. Ebhekisa kwi "Productivity" DeFi slogan, uButerin wabelane ngokungamkeli kwakhe. Kwi-tweet eyahlukileyo, wongeze:
Izinto ezininzi ezi-flashy ziyonwabisa kakhulu, kodwa ixeshana; inyani kukuba akukho ndlela yokuba iDeFi ibe namazinga wenzala ngaphezulu kwepesenti ngaphezulu kweyona mali yezemveli ekuhambeni kwexesha. ”
Abasebenzisi bafumana inzuzo ephezulu kwinethiwekhi yeDeFi ngokubonelela abathengisi ngee-asethi zabo ze-crypto ngentlawulo. Yonke imisebenzi eneDeFi ijolise kwimali mboleko esemagunyeni nakwimigodi.
I-Buterin ijonga umbono njengongenabugocigoci kunye noxinzelelo. Nangona kunjalo, ucaphule ezinye izinto azithandayo kubume bezakhiwo. Babandakanya imibutho ezimeleyo yozinzo (i-DAO) kunye nomrhumo wolawulo lwemali olusemthethweni oluziimeleyo (i-DAICO), alubiza ngokuba "lunomdla kwaye lubalulekile."
Uye wafanisa umdlalo wokonga u-Ethereum, i-PoolTogether, ne-lottery. Ngelixa eyamkelayo loo nto "Esi sisixhobo esitsha sokwakha ingqondo esinokuphucula amandla abantu okwenza imali."
Kwelinye icala, uluntu lwaseDeFi alukuthandi ukugxekwa kukaButerin. Umphuhlisi we-Ethereum, umzekelo, uthe ulimo lwesivuno lufana notyalo mali oluqhelekileyo.
Ithemba leDeFi lilungile kuzo zonke iiakhawunti ngobuchule obunokubakho.
I-Ethereum (ETH) njengoko ibonwa kwiNtengiso
I-Ethereum (i-ETH), eyona mali yesibini ngobukhulu yedijithali ngoqoqosho lwentengiso, ithe ndlelantle kuluhlu lwamaxabiso e-sub- $ 200 kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo emva kohambo lwamaxabiso, olunokuthiwa luphawu.
Nangona kunjalo, phantse zonke ii-cryptocurrensets eziphambili kwimarike okwangoku zihlangabezana nokwehla kwamaxabiso, kubandakanya i-Ethereum (ETH), kodwa, mhlawumbi, imali yedijithali ayizukuwela ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso leedola ezingama-200 ngeli xabiso langoku lokufumana kwakhona.
Ngexesha lale ngxelo, i-ETH ithengisa nge- $ 223.95 nge-downtrend ye-2.36% ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo.
tags Imali eyabelwe imali, Defi, Ethereum (ETH), Vitalik Buterin